रबि लामिछानेलाई: नविना सिलवालकाे मनछुने पत्र ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
रबि लामिछानेलाई: नविना सिलवालकाे मनछुने पत्र !
२०७६ भाद्र २ गते सोमवार
• हजुर को हो काहाको हो केही थाहा छैन। न म हजुरसग फेसबुकमा फ्रेन्ड छु न त हजुरको र मेरो चिनजान नै छ। हजुरको कार्यक्रम “सिधा कुरा जनतासग” हेर्थे कहिलेकाही, हजुरले गरेका थोरै मात्र कामहरु हेरेको थिए राम्रो लाग्थ्यो। जब “सालिकराम पुडासैनी” को मृत्यु भको समाचार हेरे, तब थाहा भयो कि उहाँ पनि हजुरकै सहकार्मी हुनुहुदो रहेछ। त्यसको लगभग 2/3 दिनपछी एक्कासी बेलुका रविलाई पुलिसले समातेर लगेछ भनेको खबर देखे म झसङ्ग भए किन लगेछ भनेर। अनि मैले पुराना नया सबै भिडियो हेर्दै जादा थाहा पाए कि सालिकराम पुडासैनी मर्नु अघि हजुरको नाम लिएको रहेछ भनेर। त्यसपछी म बिगत शुक्रबार बाट युटुब तथा हरेक सामाजिक सन्जालमा त्यही बारे खोजी खोजी हेर्न थाले।
सालिकराम ले बनाउनुभएको भिडियो करिब 10/15 पटक भन्दा बढी रिपिट गरिगरी हेरिसके। म पनि एउटा कलाकार भएको नाताले हो या त सबैले हो हो भनेको भरमा हो त्यो भिडियो सालिकराम को मनोज्ञानले बनाएजस्तै लागेन। जब हजुरलाई समातेर एउटा किड्न्यापिङ तरिकाले लगिएछ अनि जति पनि मैले चितवनको अहिलेको माहोल हेरिराछु शुक्रबार बाट हजुरको बारेमा थाहा पाइरहेको छु, साच्चिकै मेरो परिवारको सदस्य लगे जस्तो फिल भैरहेको छ। हजुरले गरेका काम अनि हजुरलाई नचिनेकी मैले, आज त्यो माहोल अनि प्रत्येक जनमासले बोलेको त्यो शब्दहरुले यो मन धेरै रोएको छ। हजुर त साच्चिकै तीन करोड जनताको मनमुटु हुनुहुदो रहेछ। हिजो राती रमेश प्रसाईं जि को शब्द सुनेर अनि अहिले भर्खरै त्यो माहोलको शब्द सुनेर साच्चिकै कति बेला रोएछु थाहा नै पाइन। दादा हजुर त जनताको मात्र नभएर नेपाल कै ढुकढुकी हुनुहुदो रहेछ।
तीन करोड नेपाली को त्यो आवाज….😥… दादा भनिन्छ राम्रो मान्छे कै धेरै दुश्मन हुन्छन् भनेर। “हजुरको ब्यक्तिगत जीवन के हो कसो हो त्यो मेरो र हाम्रो चासो को विषय हैन, तर हजुरले हाम्रो लागि केके गर्नु भयो त्यो प्रमुख कुरा हो।” किन मेरो मनले भन्दैछ कि त्यहा हजुर सुरक्षीत हुनुहुन्न भनेर? दादा साच्चिकै आज म धेरै रोए हजुरलाई सम्झेर। जहाँसम्म लाग्छ हजुर निर्दोष हुनुहुन्छ र निर्दोष नै ठहरियोस्। हजुर मेरो मात्र नभएर तीन करोड नेपालीको मनमुटु हुनुहुन्छ, हाम्रो बिश्वास नतोडियोस्। आफ्नो ख्याल गर्नु चाडै फर्केर आउनु दादा, मलाई लाग्छ हजुर त्यहा बाट निस्केपछी सालिकराम पुडासैनी को हत्या हो या आत्माहत्या र यदि हत्या रहेछ भने त्यो हजुरले नै पत्ता लगाउनु हुनेछ दादा। को हो हजुर थाहा छैन, तर हजुरलाई सम्झेर धेरै रोए दादा एकदम माया लागिराछ। यो सब भन्दा सायद कसैकसैले मलाई रविको अन्धभक्त पनि भन्न सक्छन्। तर म त सानै छु जे देखे जे बुझे त्यो प्रकट गरेकी हु। यदि मेरो मनले हजुरलाई साथ दिदा म अन्धभक्त हुन्छु भने अन्धभक्त नै सहि। गलत बोलेको रहेछु भने सम्पूर्णमा माफी चाहन्छु। धन्यवाद